Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Tena ilaina ny fiofanana ho an'ny mpiasa aviation ho an'ny post covid
IATA: Fiofanana ilaina amin'ny mpiasa fiaramanidina aorian'ny pandemika
Ny fitsipi-pifehezana, ny fandidiana, ny fiarovana ary ny toekarena dia voafaritra ho faritra lehibe indrindra amin'ny fiaramanidina izay ilana fiofanana hahafehy ny toe-javatra ankehitriny.
36% amin'ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana dia efa namindra ny fifantohany amin'ny halavirana / e-fianarana.
85% amin'ireo valinteny fanadihadiana dia nilaza fa ny fianarana an-tserasera anisany ny efitrano fianarana virtoaly dia hanana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Rehefa manarina ny seranam-piaramanidina dia ho zava-dehibe ny lohahevitra toy ny faharetana sy ny nomerika.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) namoaka fikarohana momba ny fitakiana fiofanana ho an'ny mpiasa fiaramanidina rehefa manomboka miarina amin'ny krizy COVID-19 ny indostria. Ny fiofanana momba ny mpiasa an'habakabaka ilaina amin'ny asan'ny kovida aorian'izay dia ilaina fa ilaina tokoa
Araka ny fanadihadiana manerantany momba ny mpitarika olona iray (HR) 800 eo amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina tompon'andraikitra amin'ny fianarana sy ny fampandrosoana, ny fahaiza-miasa mahomby ary ny fiantohana fa ny mpiasa vaovao avy amin'ny fiaramanidina ivelany dia afaka mahazo ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fomba mahomby. mpiasa miasa aorian'ny areti-mandringana.
Mba hahatratrarana izany dia mila ampifanarahana ny fandaharam-panofanana, amin'ny antsasaky ny valinteny HR dia nanambara fa ny laharam-pahamehany dia ny manombana ny fahaizan'ny mpiasa miasa ary mametraka an-tsary ireo mifanohitra amin'ny takian'ny fahaiza-manaon'ny fikambanana. Io no ho fototry ny fandaharam-pampianarana ilaina. Ny areti-mandringana dia efa nanery ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro sy orinasa hafa amin'ny rojom-bidy, toy ireo mpamatsy serivisy an-tanety, hanombatombana ny fahaiza-manao ankapobeny ananan'ny mpiasan'izy ireo hifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny asa vaovao. Ny tranga iray dia ny filàna enta-mavesatra entana ao anaty vilanin'ny fiaramanidina mpandeha izay naverina hitondra entana fotsiny.
Rehefa sitrana ny fangatahana sidina an'habakabaka dia hamerina ny mpiasa ireo orinasa nefa koa hanakarama avy any ivelan'ny indostria. Ny valin'ny fanadihadiana dia nampiseho fa ny lohahevitra momba ny fiarovana, ny asa, ny filaminana ary ny fitsipi-pifehezana ara-toekarena dia nofaritana ho ny sehatra lehibe ilana fiofanana hahafehy ny toe-javatra ankehitriny. Nasongadina ho fiarovana manokana ho an'ny seranam-piaramanidina, mpanome serivisy an-tanety ary seranam-piaramanidina ny fiarovana.
“Nanome fiofanana ho an'ireo matihanina momba ny fiaramanidina nandritra ny 50 taona ny IATA. Ny natiora ara-teknikan'ny indostria misy antsika, miaraka amina fepetra henjana voafaritry ny mpanara-maso, dia mitarika ny filàna fiofanana manara-penitra manerana ny sehatra. Manoloana ny zava-misy fa ny krizy COVID-19 dia nanery orinasa maro hijanona tanteraka na hampihena tanteraka ny fiofanana, dia hanohy hampifanaraka ny portfolio izahay mba hahazoana antoka fa afaka mandray anjara amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostria, "hoy i Frédéric Leger, filoha lefitra lefitra miserana, Vokatra sy serivisy ara-barotra ao amin'ny IATA & Cargo Network Services (CNS) filoham-pirenena.
IATA dia nanomboka lahasa maromaro to manampy amin'ny fiofanana ho an'ny mpiasa fiaramanidina.